Ministeran'ny Aterineto - Misionan'i Solarà Filipina
Firenena lehibe sy làlam-barotra goavana ho an'i Azia
Miaraka amin'ireo nosy 7,000 sy mponina mitombo isam-bolana 104, Filipina dia firenena lehibe sy vavahady stratejin'i Azia. Maro ireo Filipiana miasa ao Shina, firenena Aziatika hafa, ary na dia any amin'ny faritra afovoany atsinanana aza, izay toerana misy azy ireo.
Andraikitra manan-danja sy fotoana ho an'ny mpilalao masoandro
Ny Fiangonan'ny Tompo dia tany Philippines nandritra ny taona maro noho ny ezaka nataon'ny misiona teo aloha sy ankehitriny. Misy kongregasiona 800 izao ankehitriny. Ny kristiana Filipiana dia vonona ny hitory bebe kokoa ny fireneny ary hampiroborobo ny fotoan'ny fitomboana ho an'ny Fiangonana, saingy mila fitaovana izy ireo mba handresy ireo olana sasany.
Fiangonana maro any Filipina dia manana mpitoriteny amin'ny fotoana sasany na tsy misy mihitsy. Ny mpilalao masoandro dia afaka manome vondrona fiangonana sy antokon'olona amin'ny fampianarana lalina. Ambony sy sarotra ihany koa ny faritra maro any Philippines. Ny mpilalao masoandro dia natao nandritra ny fotoana sy toerana toy izany.
Tao amin'ny 2014 Sunset dia nanomboka ezaka lehibe amin'ny kontinanta maro nampiasa mpilalao horonam-peom-pitaovana solosaina hikasihana amin'ny tontolo miaraka amin'ny Filazantsara. Manohy mamelatra ny Teny ho an'ny ambin'izao tontolo izao ny hetsika Solar. Ny Solar Player dia ahitana ny ora 400 amin'ny Baiboly sy ny fampianarana Baiboly.
Ny drafitr'asa ho an'ny Solar Mission Philippines dia ny handrakotra io firenena io amin'ny Tenin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny famaranana ny mpilalao amin'ny teny anglisy amin'ny teny anglisy ao Filipina amin'ny faran'ny 2,000. Izy ireo dia homena ny fiangonana rehetra ao amin'ny firenena, amin'ny ezaka amin'ny asa fanompoana samihafa, ary amin'ny mpitarika fiangonana sy evanjelista izay hamboly sy hanamafy orina ireo fiangonana ary matotra ireo rahalahy.
Ny ezaka natao manerana ny firenena mba hitandroana ny vola ilaina dia nanomboka ny volana Janoary 24th ary handeha amin'ny Desambra 31, 2018. Fiangonana sy olona an'arivony no hangatahana mba hanohanana an'io ezaka io.
Amin'ny alàlan'ny fahalalahan'ny mpanolotra tsy fantatra anarana, ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny Sunset International Bible Institute dia mifanandrify dolara amin'ny dollar. Ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny tetik'asa Solar dia mahafeno ity lalao ity.
Antsoy ny Sunset ao amin'ny 800-658-9553 mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny Solar Player ho an'i Filipina na tsidiho ny tranokalany http://www.sibi.cc/solar.